Pipe Connectors Fekitori | China Pipe Connectors Vagadziri uye Vatengesi
Kunyangwe mukuvaka ngarava, kuvaka masevhisi einjiniya, kana iyo michina yemafuta, kana kuvaka masitepisi emagetsi - zvigadzirwa zveelastomer zvinogadzirwa nekambani yedu zvinotarisa pakuderedza kusagadzikana, kupatsanura ruzha nekudengenyeka, kutora kuwedzera kwekushisa kana kuvaka kuderera uye kubhadhara zvakasarudzika panguva kuisirwa. Isu tinogadzira zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana siyana dzekushandisa. Rubber Kuwedzera Majoini inochinjika chinongedzo chakagadzirwa kubva kuchisikigo kana synthe ...
Metal Hose inonzi zvakare simbi inochinjika yekubatanidza pombi, yakakosha zvikamu zvekubatanidza muprojekiti, nekubatanidzwa kweye corrugated inoshanduka pombi, mambure sleeve uye akabatana. Simbi inoshanduka majoini anoshandiswa seanobhadharisa zvinhu, kuvhara zvinhu, kubatanidza zvinhu, uye kushamiswa kwekutora zvinhu mune akasiyana emvura uye gasi mapaipi masisitimu uko kureba, tembiricha, chinzvimbo uye angle muripo masisitimu anodikanwa. Deredza kushushikana kwepombi yekubatanidza kune inononoka kutenderera michina su ...